Dagaal gaystay khasaare oo kadhacay Muqdisho iyo Saraakiisha Ciidanka dowladda oo ku hanajabay inay Al-Shabaab ka sifeyn doonaan Muqdisho – Radio Daljir
Dagaal gaystay khasaare oo kadhacay Muqdisho iyo Saraakiisha Ciidanka dowladda oo ku hanajabay inay Al-Shabaab ka sifeyn doonaan Muqdisho
Muqdisho,Dec,26 -Dagaal gaystay khasaaro isugu jirta dhimasho iyo dhaawac ayaa xalay kadhacay degmada Kaaraan ee magaalada Muqdisho,kaasi oo u dhaxeeyay ciidamada dowladda KMGS oo kaashanaya Amisom iyo kooxda Al-Shabaab.
Wararka ayaa sheegaya dagaalkani inuu sababay dhimashada 1-qof iyo dhaawaca 11 qof oo isgu jirtay dad shacab ah iyo dhinacyadii dagaalamayay.
Gaashaanle sare Maxamed Maxamuud Saney oo ka mid ah saraakiisha ciidanka dowladda faderaalka Soomaaliya oo waraysi siinayay Radio Daljir ayaa waxaa uu sheegay dagaalka inuu ahaa mid ku dhufoo ka dhaqaaq ,oo ay kusoo qaadeen dagaalyahano katirsan ururka Al-Shabaab.
“Ma’ahayn weerar ama dagaal fool ka fool ah oo ay soo qaadeen,balse waxaa uu ahaa weerar ku dhufoo ka dhaqaaq,anagana difaacayna ayaan ku jirnaa markasta oo ay nasoo weeraraan waan iska difaacaynaa,difaacayna ayaa aad u adag wax horumar ah oo ay samayn karaan ma jirto”ayuu yiri gaashaanle sare Maxamed Maxamuud Saney oo intaasi ku daray inuusan ciidanka dowladda khasaare kasoo gaarin dagaalkan.
“Sideedaba waxaan uga hortagi karnaa inagoo amar nala siiyo oo u dhaqaaqno meelaha oo ay ku dhufoo ka dhaqaaqda ama ay weerarada nooga soo qaadayaan,waxaana rajaynayaa dhoor bari ama maalmo ka bacdi amarkaas in nala siiyo oo aan ku dhaqaano”ayuu yiri mar kale Gaahsaanle sare Maxamed Maxamuud Saney.
Kooxda Al-Shabaab ee kasoo horjeeda dowladda faderaalka Soomaaliya iyo ciidamada Midowga Afrika Amisom ee kusugan magaalada Muqdisho ayaa inta badan weeraro ku qaada fariismayaalka ciidamada dowladdu iyo kuwa kaabaya ee Amisom ay ku leeyihiin Muqdisho.